Fahadisoana mahazatra amin'ny fikarakarana alika | Tontolo alika
Fahadisoana mahazatra amin'ny fikarakarana alika
Ny fandraisana ny biby fiompy dia mitaky ezaka sy fahafoizan-tena, satria isika no tompon'andraikitra indrindra amin'ny fiadanany ara-batana sy ara-pihetseham-po. Na eo aza izany, na eo aza ny fiezahantsika hanao lafatra ny zava-drehetra, dia mety ho diso isika. Raha tsy amboarintsika ireo tsy fahombiazana haingana, dia mety hiteraka olana lehibe izy ireo. Noho izany dia mamintina ny sasany amin'ireo lesoka mahazatra indrindra eo amin'ireo tompona alika momba ny fikarakaran'izy ireo.
1. Sakafo ratsy. Mba hitsitsiana vola dia misafidy ny hamahana ny ambiny ambiny ny alika sasany na ny sakafo tsy dia misy kalitao. Midika izany fa tsy mahazo otrikaina ilaina ilay biby mba hitomboany salama sy matanjaka. Ny sakafo maina no safidy tsara indrindra, na dia tsy maintsy avo lenta aza izy io; na marika tsy fivarotana lehibe mihitsy. Mikasika ny sakafo "ho an'ny olombelona", ny alika dia afaka mandray azy saingy amin'ny antonony, ary mazava ho azy fa tsy misy zavatra misy poizina ho azy (sira, menaka, kafeina sns). Ary mazava ho azy, tsy tokony hatolotrao azy mihitsy ny taolana masaka, satria mampidi-doza be ho azy ireo.
2. Mandehana kely. Miankina amin'ny haavon'ny alika, tsy maintsy mandeha an-tongotra mandritra ny fotoana bebe kokoa na kely isika. Ny tsara indrindra dia ny fanaovana izany ao anatin'ny fivoriana telo mandritra ny antsasak'adiny, na dia maro aza ny olona mametra ny tenany mandritra ny minitra vitsy. Fahadisoana lehibe tokoa nefa tena mahazatra, izay mety hiteraka tsy olana eo amin'ny fitondran-tena ihany, fa koa ny fahalemen'ny hozatra sy ny taolana.
3. Avelao ny alika hibaiko ny diany. Isika no mila mitarika diabe, mba hianarany hanaja ny baikontsika. Manoro hevitra ny manam-pahaizana fa tokony ho fanaontsika ny mandeha eo anilantsika ilay biby, nefa tsy misintona ny tadiny sy milamina isika. Indraindray ilaina ny mitodika any amin'ny matihanina iray manampy antsika hifehy ny toe-javatra.
4. Tsy fahampian'ny fiaraha-miasa. Mora kokoa io fomba io mandritra ny volana voalohany amin'ny fiainana, fa ny tena izy dia afaka mamaha ny olan'ny fiarahamonina amin'ny alika olon-dehibe ihany koa isika, mifanohitra amin'izay inoana indraindray. Noho io antony io dia tsy maintsy asehontsika miandalana ny biby hifandray amin'ny olon-kafa sy ny mpikambana ao aminy. Mpanazatra iray dia afaka mampianatra antsika ny fomba fanaovana azy tsara.
5. Tsy manavao antontan-taratasy ara-dalàna. Zava-dehibe ny fihazonantsika ny vaovao izay mamantatra ara-dalàna ny biby fiompintsika, toy ny karatra fiompiana sy ny angon-drakitra mifanaraka amin'ny microchip-ny. Hanamora ny fitadiavanao izany raha sendra misy halatra na fatiantoka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Fahadisoana mahazatra amin'ny fikarakarana alika
Resety mofomamy alika
Afaka mahatsapa ho meloka ve ny alika?